Ny Fomba Namolavolan’ny Sary Ny Fitantaràntsika Ny Ady Tany Vietnama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2017 15:47 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Português, русский, polski, Español, čeština , Nederlands, English
Ny sary nalain'i Nick Ut nahazo ny loka Pulitzer maneho ireo ankizy mandositra ny tanàna eo ambany fanafihana nandritra ny ady tany Vietnama dia nasongadina tao aminà seminera iray ho an'ny be sy ny maro. Loharano: Flickr / LBJ Library, sary an'i Gabriel Cristóver Pérez (Sehatra ho an'ny Daholobe).
Ity lahatsoratra navoakan'i Quyên Ngô ity dia avy ao amin'ny Loa, vohikalam-baovao sy tetikasanà onjam-peo anaty aterineto an'ny Viet Tan izay mandefa tantara momba an'i Vietnam. Naverin”ny Global Voices navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana iray fifampizarana votoaty.
Fantaro i Nick Ut, iray amin'ireo mpakasary malaza indrindra erantany tamin'ny Adin'i Vietnam. Vao tamin'ny volana Martsa teo ilay mpakasary fanao an-gazety nahazo ny Loka Pulitzer no nandeha nisotro ronono rehefa niasa 51 taona tao amin'ny masoivohom-baovao Associated Press.
Lasa nalaza i Út noho ny sarinà tovovavy (Kim Phúc) fandindonim-pahafatesana noho ny fahamaizana vokatry ny baomba natsipin'ny fiaramanidina iray an'i Vietnama Atsimo, sary nalaina tao amin'ny tanàna azon'ny tafik'i Vietnama Avaratra. Sary izay nankasitrahana na notsinian'ny maro, miankina amin'izay olona iresahanao, izay nanova ny tantaran'ny ady tany Vietnama. Mavesatra sady mahavaky fo ilay sary mainty sy fotsy. Tamin'ny nijery ilay sary, ny nanintona anay voalohany dia ilay zazavavy mihanjaka, mitomany eto aloha indrindra, ny hodiny mirehitry ny fahamaizana eo akaikin'ny setroky ny baomba lasantsy (napalm). Toy ny tena re ny fitarainan'ireo vahoaka mihazakazaka ao anaty sary.
Tamin'ny 8 Janoary 1972 i Út no naka ilay sary, fony ny fiaramanidina Vietnamiana Tatsimo nandatsaka tsy nahy baomba lasantsy tao Trảng Bàng, tanàna izay efa notafihana ny nipetrahan'ny tafika Vietnamiana Tavaratra.
lay tantara dia iray izaay naparitaka be tamin'ny haino aman-jery eran'izao tontolo izao — ary ilay sary no fanehoana tsara indrindra ireo horohoron'ny ady. Angamba tsara loatra, ka mora foana ny nampiasa azy ho toy ny fampielezankevitra. Nanazava i Út:
Samy nampiasa ny sarin'i Kim Phúc hanaovana fampielezan-kevitra na ny Atsimo na ny Avaratra. Mety hilaza ny Avaratra, ‘Sarin'i Amerika mandatsaka baomba hamonoana ny tsy manantsiny ity.’ Ary ny any Atsimo, ” Sarin'ireo Kaominista mitifitra balafomanga ity’. Ho ahy, miteny ny marina aho. Ary ireo mpanao fampielezankevitra, dia, hiteny izay teneniny izy ireo.
Hajain'ny maro izay mahatsapa fa nanampy ny fihemoran'i Amerika sy ny fiafaràn'ny ady i Út, ary notezeran'ireo hafa izay mahatsapa fa nitàna toerana lehibe tamin'ny fanampiana ny Tavaratra ilay sary, izay nanana fitongilanana voajanahary tamin'ny tafika Việt Nam Atsimo.
Nick Ut mtazona ny dika mitovin'ilay sarin'ny ady tany Vietnama nahazoany loka. Loharano: Flickr / LBJ Library, sary avy amin'i David Hume Kennerly (Sehatra ho an'ny Daholobe)
Avy amin'ireo sary manahiran-tsaina hatramin'ireo natao hiraketana ny fandresena, nolazainy koa fa efa fanao mahazatra ireo sary amboamboarina. Ohatra iray ilay sary malaza anà fiara mifono vy nandeha namakivaky ny lapam-panjakana tany Sàigòn nandritra ny ady tany Vietnama. Ny manahirana amin'ny fahazoana ilay sary, ary koa ny fahitana azy any anatin'ny bokin-tantara manerana izao tontolo izao, dia nisy mpakasary maromaro tao ambadik'ireo karazana sary misy miaramila sy fiara mifono vy, mivoaka ny vavahady — fanehoana ny fandresen'ny Avaratra. Ambarany fa ireo mpaka sarin'ny Avaratra, izay antsoiny hoe mpiasa ao amin'ny fitondrana Vietnamiana, ny antoko Kaominista, dia nipetraka taminà toerana samy hafa tamin'ny nandraketana ireo karazana fotoana ireo.
Vokatry ny famerenana fanamboamboarana maromaro ity sary ity — Izay no fomba nahazoan'izy ireo ity sary ity. Raha ny marina, tsy hoe naka sary fotsiny ilay fiara mifono vy tamin'ilay izy nivoaka ny vavahady ry zareo. Tsy maintsy nitahiry izy ireo, nivoaka, niverina im-betsaka mba hahafahany mahazo sary tsara.
Tamin'ny fivoahany, nanambara ny fianjeran'i Vietnama Atsimo ity fiara mifono vy namakivaky ny Lapam-panjakan'i Saigon ity.#vietnamwar
Mitàna toerana lehibe amin'ny fanampiana antsika hahazo ny tantara ny sary hita maso, mampahatsiahy antsika fa fakàntsary maromaro no ampiasaina amin'ny fandrafetana ny fitantarana ny ady. Ambaran'i Út fa mora apetraka sy amafisina kokoa ny fitantaràna rehefa tsy mahalala izay fantatr'izy ireo ny olona. Toy izany no mahamafy orina ny fahatsapana sy ny fandikàna.
Raha mandinika ny tantaranà ady iray tena sarotra, angamba tsotra ny famintinana: izay zavatra hitanao, angamba, dia tsy izay tena nisy na tena misy. Milaza i Út fa na inona na inona sehatry ny asan'ny tena, tena zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny manao ny fanarahana maso rehetra ilaina mba hahatakarana ny vaovaon'izy ireo.
Nizara tantara momba ny fomba nianarany ny fahaizana maka sary ny baseball mba hanamafisany ny filàna mahalala lohahevitra iray mba hampiharana tsara kokoa ny fakàna sary :
Tokony hamaky vaovao betsaka ny mpanao gazety, hijery vaovao maro. Tahaka ny ilàn'ny mpamokatra horonantsary mijery lahatsary maro. Izany no handrosoanao. Hitanao, tamin'ny 1977, nilaza tamiko mba haka sary lalao baseball ny AP. Gaga aho, niheritreritra aho, inona izany baseball? Nandeha voalohany tany amin'ny lalao baseball aho ary nieritreritra, inona ity? Fa nahoana izy ity no mitovy amin'ny Viet Cong manenjika miaramila Amerikana? Fa maninona no mihazakazaka ny tsirairay? Koa nijery ireo mpaka sary rehetra izay naka sary aho, fa tsy nahazo na inona na inona. Kivy aho. Ny andro manaraka, nanokatra gazety maromaro aho ary nijery ireo sary: toerana fototra (ilay toerana tokony ijoroan'ny mpilalao base ball ahafahany mikapoka ny baolina), toerana faharoa (ilay toerana faharoa tokony hokasihin'ny mpilalao base ball mba hahafahany mamono baolina), ny famonoana baolina (ilay isa azo vokatry ny fikapohana ny baolina avy eo mihazakazaka amin'ny zorony efatra amin'ny kianja). Mora izany! Avy eo, afaka naka sary toy izany aho.
Azo antoka kokoa ny milaza fa sarotra takarina kokoa ny ady miohatra amin'ny lalao baseball. Ary noho ny ady sy ny herisetra mbola maharitra eo amin'ny tontolontsika, dia ilaina maika noho ny hatramin'izay ny filàna ny tena fandinihina akaiky ny fomba fandrafetana ny fitantaràna.
Mba hahalalanao misimisy kokoa momba ny fakàna sary sy ny fampielezankevitra nandritra ny ady tany Vietnama, henoy ny rakipeo “Ao Anatin'ny Rakipeo“: